Ndwendwela uCle Elum kuhambo lwangaphandle unyaka wonke, iisayithi zembali, kunye nomtsalane wedolophu encinci. Ikhabhinethi eCleveland yindawo efanelekileyo yekhaya yokuhlola indawo okanye ukuphumla nje emlilweni ngencwadi elungileyo. Ifumaneka kwiibhloko ezimbalwa ukusuka kwi-Iron Horse / Palouse ukuya kwiCascade trail, isiqingatha sekhilomitha ukusuka kwisitalato esikhulu saseCle Elum, kunye neekhilomitha ezi-3 ukusuka eRosalyn.
Yakhiwe ngo-1910, ikhabhinethi inohlaziyo oluninzi olunika umdla nolukhethekileyo. Indawo epholileyo ye-660 yeenyawo zeenyawo ibonisa isitovu senkuni, iinkuni ezininzi ezibuyisiweyo, iisilingi zentsimbi, ibhafu yeenyawo zozipho kunye nelizwi lombhobho. Ileli eqengqelekayo yethala leencwadi inyukela kwigumbi eliphezulu kwaye ikhitshi “iikhabhinethi” ziibhaskithi/iilokha zesikolo.
Izinketho zokulala yibhedi yokumkanikazi kwigumbi lokulala elincinci, ibhedi ephindwe kabini kwigumbi lokuhlala kunye nenye ibhedi enye kwigumbi eliphezulu.
Indawo yangasemva iphangalele ngemithi yeapile kunye neplum kunye nomngxuma wehashe. Unokubona ixhama libhadula ngakumbi ekwindla xa ama-apile evuthiwe.
Ikhitshi ineepani zokupheka ezisisiseko, izitya kunye nezitya. Kukho necandelo elilungileyo leziqholo, iziqholo, kunye ne-pantry staples. Sikwabonelela ngekofu, iti, ikokho, umxube we-pancake kunye ne-oatmeal ukuze ube nesidlo sakusasa ekhaya ngaphambi kokuba uye kusuku lwakho.
Ukuba ufuna ukusebenza, kukho idesika entle / indawo yokusebenza enekhompyuter ejonge ngasemva.
Umlambo waseYakima uphantsi nje kwisitrato sokuloba kunye ne-rafting. Ukuhamba intaba kunye nokuhamba ngebhayisekile kwi-Alpine Lakes Wilderness, iHlathi loLuntu lwaseTeanaway kunye neHlathi leSizwe kukuhamba nje okufutshane. Ebusika kukho iipaki ezininzi zekhephu ezikufutshane ukuze ukhwele ikhephu, ukutyibilika ekhephini kunye nokuhamba ngekhephu. Sinepere ezintathu zezihlangu zekhephu owamkelekileyo ukuba uziboleke - vele uze neebhutsi zakho.
Intsapho yethu ibisiza kwindawo yaseCle Elum ngaphezu kweminyaka engama-30. Siyakuthanda ukuchitha ixesha kwiKhabhinethi eCleveland kwaye siyavuya ukwabelana nawe ngayo!